I-DECK PAINT VS STAIN (IINDIDI, UKUQINA KUNYE NESIKHOKELO SENDLEKO) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi I-Deck Paint vs Stain (Iindidi, Ukuqina kunye nesikhokelo seNdleko)
Nantsi ipeyinti yethu yokupeyinta vs isikhokelo sendawo kubandakanya ukuba yeyiphi eyona nto ihlala ixesha elide kunye neendleko kwaye loluphi uhlobo lwepeyinti okanye ibala oza kulisebenzisa kumgangatho wakho.
Xa ujonge ekuhlaziyweni kwedesika, ezimbini zezona zikhetho zithandwayo ekugqibezeni ipaki ziyapeyinta idikki okanye zibeka emgangathweni.
Ngalunye lwezi zikhetho lubonelela ngobuninzi bobubi kunye nobubi, kwaye zombini zinokutshintsha ngokupheleleyo ukubonakala kwedesika yakho esele ikho.
Kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uziqwalasele xa uxoxa ukuba loluphi ukhetho oluya kulungela wena kunye neprojekthi yakho, inokuba lixabiso, ukuba luqine kangakanani isiphelo, luhlala ixesha elingakanani okanye nokuba kuya kuba lula kangakanani ukufaka. Olunye uthelekiso lwezi zinto zingezantsi.
I-Deck Paint vs Iindleko zeStain
Iindleko zePaint Paint
I-Deck Stain Iindleko
Iindleko zeDisk Sealer
Ipeyinti vs Ukuqina kwebala
Yintoni ehlala iipeyinti ezinde okanye ibala?
Ngaba kungcono ukupeyinta okanye ukungcolisa idesika?
Loluphi olona hlobo lubalaseleyo lwedayi oyisebenzisa kwidesika?
Loluphi olona luhlobo lubalaseleyo lwepeyinti onokulusebenzisa kwidesika?
Ukupeyinta kumgangatho weedola kubiza malunga ne-30- $ 60 nge-gallon nganye. Igaloni enye yepeyinti igubungela malunga neenyawo ezingama-300 ukuya kwezingama-400.
Ngelishwa, xa usebenzisa ipeyinti kuya kubakho ezinye iimveliso ezimbalwa ekufuneka zithengiwe ngezona ziphumo zibalaseleyo zepeyinti, nokuba usebenzisa ipeyinti ethile yangaphandle.
Ukuhamba kakuhle ezincwadini zendlela
Ukupeyinta iinkuni kuthetha ukuba kufuneka ufumane isilondolozi somthi ukuze ipeyinti ingonakalisi iziqwenga zemithi zendalo. Le mveliso imalunga ne- $ 15 ukuya kwi-40 yeedola.
Ukongeza, ukwenza ipeyinti ihambelane ngokufanelekileyo nefayile ye- Umgangatho weenkuni , kuya kufuneka kusetyenziswe ngaphambi kwepeyinti. Le primer inokuqhuba malunga ne-15 ukuya kwi-30 yeedola. Konke kuwe ujonge malunga ne- $ 75- $ 150 ngeenyawo ezingama-300 zenyawo.
Iindleko zedisk zibiza malunga ne-20 ukuya kwi-30 yeedola ngegaloni nganye. Igaloni enye yamachaphaza igubungela malunga neenyawo ezili-150 ukuya kwezingama-300 zenyawo, kuxhomekeke ekubeni utyebile kangakanani umbala owufunayo kwaye zingaphi iidyasi ozisebenzisayo.
yintoni ibhendi yomtshato
Ukukhetha ibala kuthintela iindleko ezongezelelweyo zokufuna ukunyanga iinkuni kwangaphambili, njengoko ibala lenzelwe ngokukodwa ukugcina iinkuni.
Kulungile, nangona kunjalo, ukufumana isitywina sokuwela ngaphezulu kwebala, oku kwenza ukuba ibala elihlala ixesha elide kunye nedeke. Umgangatho ubonakaliswe kwizinto zemozulu ezinokuba rhabaxa ukuba azitywinwanga ngokufanelekileyo.
Ukutywina kunokuxabisa malunga ne-40- $ 60 nge-gallon nganye. Oku kukushiya kwiindleko ezingama- $ 60 ukuya kuma-80 ngeenyawo ezingama-300 zeenyawo, emva kokubandakanya iibrashi kunye neeroller zokufaka.
Gcina ukhumbula ukuba eli xabiso alibandakanyi nayiphi na indlela yokuhluba enokufuna ukwenziwa ukuba ipeyinti yayipeyintwe ngaphambili.
Ukufakwa kobungcali kwezi zinto ziya kuba zilingana ngeyure, kodwa umzobo uthatha malunga namaxesha ama-2 ubude, ngenxa yeebhatyi ezininzi zeemveliso ezahlukeneyo ekufuneka zisetyenzisiwe kumgangatho.
Ibala linokuthatha ixesha elide ukuba unqwenela iingubo ezininzi. Lindela ukuhlawula malunga ne-10% ukuya kwi-20% ngaphezulu kwiprojekthi ukuba ujonge ukuqesha iingcali.
Ipeyinti yedesika: Ukupeyinta ikhonkco sisisombululo esomeleleyo kakhulu ekutshintsheni indawo. Ipeyinti inikezela ngokhuseleko lwe-UV kunye nokufuma ukuba usebenzisa uhlobo oluchanekileyo.
Ipeyinti esekwe kwioyile ilungile xa isiza kukhuseleko lokufuma olukhankanyiweyo ngaphambili, oluncedo xa uhlala kwimozulu emanzi.
Ipeyinti esekwe kwiLatex yeyona ilungileyo xa ukwimozulu enelanga ngenxa yeempawu zokumelana ne-UV.
Ibala ledesika: Ukugcina i-deck kunokuba sisiphelo esomeleleyo ngokunjalo, nangona ngaphantsi komzobo kuya kuba njalo.
Ipeyinti yedesika: Ubude bobomi bokupeyinta idesika buhle kakhulu ukuba ungumnikazi wendlu. Rhoqo sisizathu sokuba ipaki kufuneka ihluthwe ukuze umbala kunye nokugqitywa kutshintshwe kuthelekiswa nepeyinti engapheliyo.
Ibala ledesika: Xa ujonge ukungcolisa indawo yokuhlala, ubude bobomi kunokwenzeka kuphela ukuya kuthi ga kwiminyaka esi-8, ihlala iphantsi. Oku kunokuxhomekeka ekubeni zingaphi iidyasi ezisetyenzisiweyo, imozulu, kunye nomgangatho webala.
Iingubo ezininzi zebala ozisebenzisayo, okanye ukuphakama kwebala olifumanayo, liya kukunika i-pigment ephezulu. Okukhona umbala ulichaphazela ngakumbi umbala, kokukhona iya kuxhathisa ngakumbi kokubini kokubuna kwe-UV kunye nokufuma.
Ukusuka kumbono wobulunga, ipeyinti iya kuba yinto ehlala ihleli, imveliso eyomelele ngakumbi. Ukongeza, ukupeyinta indawo yokuhombisa kunika imibala eyahlukeneyo enokuthi ikhethwe. Ukupeyinta kulula kakhulu ukugcina ngaphezulu komjikelo wobomi.
Oku kuyathethwa, ukugcoba kunika ukujonga kweenkuni zendalo ezinokutsala. Kwaye, ukuvuselelwa rhoqo kwiminyaka emi-5 okanye njalo akusoloko kubi kakhulu kwimeko yongcamlo kunye neendlela eziguqukayo kwaye unokuphinda uhlaziye xa kuthelekiswa nokuhamba kwayo yonke inkqubo yokuhluba.
Zimbini iintlobo zamabala anokukhethwa.
Ibala leoli: Amabala asekwe kwioyile alungele ukukhusela iinkuni nakweyiphi na into ejijekayo okanye yokuqhekeka. Bagxotha amanzi kunye nokunciphisa umngcipheko wokubumba.
Ibala elisekwe emanzini: Amabala asekwe emanzini asematsha kwaye ayathandwa ngenxa yamanqanaba asezantsi e-VOC kunye nexesha elomileyo elomileyo. Ibala elisekwe emanzini yile mveliso ibiza kakhulu.
Kwindawo enamanzi amaninzi aManzi iya kuba lolona khetho lulungileyo, ngaphandle kokuba uhlahlo-lwabiwo mali luthintelwe kakhulu.
indlela yokucheba kwaye ungafumani amaqhuma
Njengakumabala kukho iintlobo ezimbini zeepeyinti ezinokukhethelwa uyilo lomgangatho .
Ibala leoli: Ipeyinti esekwe kwioyile ihlala ngaphezulu kweminyaka eli-10, elona xesha lobomi liphezulu kakhulu kunamabala afumanekayo. Le peyinti yeyona ilungileyo ekumeleleni nasekuxhathisweni kokufuma.
Ngelishwa amanqanaba e-VOC aphezulu kakhulu kwaye kuthatha ubuncinci iiyure ezingama-24 ukubeka naziphi na iingubo ezongezelelweyo.
Ibala elisekwe emanzini: Ipeyinti esekwe emanzini, njengamabala asezantsi emanzini, asezantsi kwii-VOCs ezilunge ngakumbi emzimbeni wakho nakwindalo esingqongileyo.
Ukongeza, ipeyinti esekwe emanzini yeyona ilungileyo ekukhuseleni nakuphi na ukubuna ngenxa yelanga okanye ukukhanya kwe-UV. Olu hlobo lwepeyinti luthatha kuphela malunga neeyure ezingama-6 ukuphinda uphinde.
Kwiimeko ezininzi iBala eliSisiseko laManzi liya kuba lolona lukhethiweyo, kodwa njengemveliso entsha, ihlala ihoywa.
Imibono yosuku lokuzalwa kadade wabo
Ukuba unomdla wokudala eyakho eyadini yangasemva kukho i-assortment ye isoftware yoyilo iinkqubo ezinokunceda. Oku kunokukunceda uyile kwaye ubenombono wendlela ocinga ngayo ngokuthe ngqo kwiiyadi yakho yangasemva, ukufumana eyona nkangeleko uyifunayo.
indlela yokuxelela ukuba iringi iyinyani
uhamba phantsi iingoma zendlela ngo-2020
Abafazi abasesikweni beesuti ezimnandi zemitshato
iindawo zomlilo ezihlanjwe mhlophe
Iingoma zokwamkela umtshato ze-r & b
ibar yegumbi lokuhlala